Uncategorized | नेपाल इटाली डट कम
Press release on Machine Readable Passport (MRP)
Posted in posted by mail, Uncategorized. 1 Comment »
March 3, 2010 — nepalitaly
काठमाडौं, १८ फागुन : सामाजिक सुरक्षा कमजोर हुँदै जाँदा देशमा जताततै आतङ्क मच्चिएको छ । आक्रमण र धम्कीले जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्मका उद्यमी र सञ्चारकर्मी त्रसित छन् भने नेपालगन्जका व्यवसायीले देशै छाड्ने अवस्था आएको छ ।
करिब चार साताअघि महाराजगन्जस्थित राष्ट्रपति निवासमा उपरराष्ट्रपतिले सपथ लिइरहेका बेला दुई सय मिटर तल लाजिम्पाटमा मारिएका सञ्चारउद्यमी जमिम शाहको हत्याका योजनाकार अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । हत्याको विषयमा लगातार समाचार लेखेको आरोप लगाउँदै नयाँ पत्रिका सम्वाददाता मनोज घर्तीमगरलाई मंगलबार ज्यान मार्ने धम्की आएको छ । घटनाका मतियार सइ प्रकाश क्षेत्रीको बयानमा आधारित ‘डिस्को जाने लतमा जमिम हत्यामा सहयोग गरेँ,’ शीर्षकको कभरस्टोरी मंगलबार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ । मंगलबार बिहान १०ः३० बजे मोबाइलबाट मोबाइलमै फोन गरी मनोजलाई पनि जमिमलाई जस्तै मार्ने धम्की आएको थियो । -३ पेजमा पनि)
त्यस्तै चार साताअघि सञ्चारउद्यमी जमिम शाहलाई गोली हानी मारिएकै क्षेत्र काठमाडौंको लाजिम्पाटमा मंगलबार मेडिकल व्यवसायी डा. नागेन्द्र पम्पाटीमाथि गोली प्रहार भएको छ । गोकर्णमा गल्फ खेलेर र्फकंदै गर्दा लाजिम्पाट सांगि्रला होटलपछाडि रहेको आफ्नै निवासको गेटबाहिर उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो ।
तर, चालकले गाडी भगाएकाले पम्पाटीको ज्यान भने जोगिएको छ । उनी चढेको बा६च ९९९९ नम्बरको ल्यान्डरोभर गाडीको सिसा भने गोली लागेर फुटेको छ । more..
Posted in posted by mail, Uncategorized. LeaveaComment »
जीवन सुखी बनाउने दौडमा उनीहरू आमाको माया र देशको सपना कता लुकाउँदै :एनआरएन
October 18, 2009 — nepalitaly
साँझ ढल्दै थियो । काठमाडौंमा सडकका बत्तीहरू बल्न थाले । कतै-कतै अँध्यारो व्याप्त थियो । कतै सडक-बत्ती बलेका देखिन्थे भने कतै ती बत्ती पनि बलेका थिएनन् । दिउँसोको कोलाहल विस्तारै मत्थर हुँदै थियो । ‘सूर्य अस्त, नेपाल मस्त’, एकजना साथीले भनेका थिए । कतै नेपाली मस्त पनि हुँदै थिए, सायद । उता सोल्टी क्राउन प्लाजाको पाँचतारे होटल भने गुल्जार थियो । गएको तीन दिनदेखि सुरु गैरआवासीय नेपालीहरू (एनआरएन)को सम्मेलन समापनअघि अध्यक्ष छानिएका देवमान हिराचनलाई बधाई थाप्दैमा फुर्सद थिएन । ‘म समय दिन सक्दिनँ,’ सुरुमै उनले भनेका थिए । तर, त्यो भीड र उल्लासको रातमा पनि हामीले देवमानसँग संवाद गर्‍यौँ ।जापाननिवासी देवमान हिराचन पहिलोपटक विश्वभरिका गैरआवासीय नेपालीहरूको अध्यक्ष छानिएपछि सबैलाई धन्यवाद दिए । ‘म भावुक बनेको छु,’ उनले भने, ‘मेरो मनका भावना तपाईंहरूसँग राख्न सक्दिनँ,’ जीवनमा पाउनु र गुमाउनुको गहिरो अर्थ छ । हिराचनले धेरै प्राप्ति गरेका छन् र कत्ति कुरा गुमाएका पनि । प्राप्तिको लडाइँमा कैयौँपटक यिनले हारेका छन् ।
मुस्ताङको मार्फामा जन्मेर अनेक परिवेश भोग्दै जापान पुगेका देवमान हिराचनलाई उता पुगेपछि रेडियोलोजी पढ्नु थियो । जापन युनिभर्सिटीमा रेडियोलोजी भर्ना गरेपछिको उनको जीवन साह्रै संघर्षमा बित्यो । ‘संघर्ष धेरै गर्नुपर्‍यो जापानमा बाँच्न,’ ३५ वर्षअघिका रातमा उनी हराउँदै थिए, ‘मैले भोगेका समस्या त गनिनसक्नुका छन्, कुनैवेला यी समस्याबाट पार नपाइने भइयो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो ।’ त्यसवेला ‘पढ्न र बाँच्न जापानमा निकै दुःख’ व्यहोरेको लामो कथा यिनको जीवनको डायरीमा छ । अनुहारमा अनेक घात-प्रतिघात छ । दुःखका रेखा पोतिएका छन् । ‘त्यही दुःखबाट त सुखमा आइयो’, उनले सुनाए, ‘दुःख सबैको जीवनसँगै आएको हुँदोरहेछ ।’ तर, दुःख यिनलाई पि्रय लाग्यो । दुःखको लामो बाटो छिचोलेरै उनले जापान युनिभर्सिटीबाट रेडियोलोजीको पढाइ सके । more..
आज दही चिउरा खाने हैन त?
June 29, 2009 — nepalitaly
काठमाडौ। ‘असारको पन्ध्र’– आज अधिराज्यभर खेतमा रोपाइँ गरी दही–चिउरा खाएर मनाइँदैछ।
“असारको पन्ध्र दहीचिउरा खानू,साउनको पन्ध्र खीर” भन्ने लोकोक्ति प्रख्यात छ।
आज रोपाइँ गरी दही–चिउरा खानाले गति परिने विश्वासमा खेतीपाती नहुनेहरू पनि अरूको खेतमा वा आफ्नै करेसाबारीमा रोपाइँ गरेर हिलो छ्यापाछाप गरेर रमाइलो गर्छन्।
असारको समयमा किसान अति व्यस्त हुने र खेतको पानी सकिएमा वर्ष दिन खाने बाली लगाउन नपाइने हुँदा धानको बीउ रोप्नेजस्तो व्यस्त समयमा घरमा मानिस मरे पनि घुमले छोपेर काममा जानुपर्छ भन्ने किंवदन्ती छ। बोलीचालीको भाषामा आफ्नो व्यस्तता दर्शाउन पनि ‘मलाई अहिले असारको पन्ध छ’ भन्ने गरिन्छ।
रोपाइँ गर्दा आफ्ना दुःख, पीर तथा जीवनका घटनालाई गीतका रूपमा असारे गीत गाउने पनि गरिन्छ। यसै अवसरमा केही समुदायमा असारे गीतमा जुहारी खेल्ने पनि गरिन्छ।
‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ यस समयमा खेतमा पानी नभएपछि कृषकमा असार पन्ध्रको खासै उमङ्ग देखिएको छैन।
किराँत राज्य बन्द, ६ जिल्ला प्रभावित
राष्ट्रपतिको असंबैधानीक कदम र सङ्कल्प प्रस्तावमाथि संसदमा छलफलको माग गर्दै आन्दोलनरत एकीकृत नेकपा माओवादीले मङ्गलबार किराँत राज्य बन्द गरेको छ ।
बन्दको प्रभाव उदयपुर, खोटाङ, भोजपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गालगायतका जिल्लामा परेको छ । ती जिल्लामा बिद्यालय, बजार र यातायात सबै ठप्प रहेका छन् ।
बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै बन्दकर्ताले उदयपुरमा दुईवटा मोटरसाइकल चालकलाई हातपात समेत गरेका छन् ।
एमाले-माओवादीबीच सहमतिको प्रस्ताव पेश गर ्ने सहमति
काठमाडौं, जेठ २६ – प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार गोदावरीमा भएको वार्तामा ‘सहमतिको प्रस्ताव पेश गर्ने’ सहमति भएको छ। सहमतिको प्रस्तावमा समावेश हुने बुँदा निश्चित गर्नका लागि दुवै पार्टीका सचेतकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। जसअनुसार एमालेबाट भीम आचार्य र माओवादीबाट पोष्टबहादुर बोगटीले सहमतिका बुँदा तयार पार्नेछन्। यस्तो प्रस्ताव बुधबार दुवै पार्टीका नेतासमक्ष पेश गरिने जानकारी पनि दिइएको छ।
उनीहरुबीच अवरुद्ध संसद सुचारु गर्नेलगायतका विषयमा ललितपुरको गोदावरीमा वार्ता भएको थियो । छलफलमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई पनि सहभागी थिए ।
यसअघि पनि एमाले र माओवादीले गोदावरीमै बैठक गरी आपसी तिक्तता समाधान गरेका थिए ।